१५० जना संक्रमित थपिए, ६०९ जना डिस्चार्ज - ।। Naya Kuro ।।
६ श्रावण २०७७, मंगलवार १८:१५ July 21, 2020 Naya KuroLeaveaComment on १५० जना संक्रमित थपिए, ६०९ जना डिस्चार्ज
साउन ६ । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १७ हजार ९ सय ९४ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा एक सय ५० जना नयाँ संक्रमित थपिएसंगै जम्मा संक्रमितको संख्या १७ हजार ९ सय ९४ रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वोर गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ६ सय ९ जना संक्रमण मुक्त भई घर फर्केका छन् । अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त भएर घर फर्कनेको संख्या १२ हजार ४ सय ७७ पुगेको छ ।
निको हुनेको संख्या ६९.३४ प्रतिशत हो । नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट ४० जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ९ सय ६३ वटा पिसिआर परिक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले देशभर २१ हजार ७ सय ४ जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् ।
भोजपुर, पाँचथर, धनकुटा, संखुवासभा, रसुवा, मनाङ्ग र मुस्ताङ्ग गरी सात जिल्ला संक्रमणमुुक्त भएका छन् ।
यसैबीच, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भदौ १ गतेदेखि लकडाउनका कारण बन्द भएका आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु गराउने सरकारको निर्णय भएको जानकारी दिँदै यसले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आएको नठान्न आग्रह गरेको छ ।
अत्यावश्यक नपरेसम्म यात्रा नगर्न आग्रह गर्दै प्रवक्ता गौतमले स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण नियमहरु पालना गर्न र गराउन एयरलाइन्सहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । imagekhabar
यातायात व्यवसायीको असन्तुष्टि सम्बोधन, बिहीबारदेखि गाडी कुदाउने
अमेरिकामा एकै दिन ६० हजार सङ्क्रमित थपिए
के तपाइलाई ग्याष्ट्रिककाे समस्या छ? घरमै यसरी गर्नुहोस सजिलो उपचार, केही दिनमै छुटकरा पाइन्छ
१५ पुष २०७६, मंगलवार १५:१७ December 31, 2019 Naya Kuro
२८ असार २०७७, आईतवार १०:१८ July 12, 2020 Naya Kuro
फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष नेम्वाङको निधन
२६ माघ २०७५, शनिबार १७:२८ February 9, 2019 Naya Kuro